Tourism Seychelles "North America Yegore Mugovera" Inoenda Virtual
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Tourism Seychelles "North America Yegore Mugovera" Inoenda Virtual
Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Tourism Seychelles yaifanirwa kuita zvinhu zvakasiyana gore rino kune yayo "North America Yegore Roadshow" nekuda kwe COVID-19. Kutevera kusavapo kwemakore maviri, kuratidzwa kwemugwagwa, uko kunowanzo famba kuenda kumaguta mana eUS, kwakaitwa neChitatu, Chikumi 2, uye zvichitevera kubudirira kwayo, chiitiko chechipiri chichaitwa neChitatu, Nyamavhuvhu 4, 25.
Seychelles Tourism yakabudirira kuburitsa yayo North America Yegore Roadshow mune chaiyo fomati gore rino.
Paive nevane makumi matanhatu nevatanhatu vekuAmerica vafambi vekufamba vakapinda kubva kumaguta ekuUS kwese kune zvibereko zuva remisangano nekuchinjana.
Vese vane hanya vakaona ichi sechiitiko chakanaka maringe nemakore maviri apfuura apo chakamiswa pasina dzimwe nzira nekuda kwe COVID-2.
Kubatana nenyika dzese mukutora mapuratifomu edhijitari kuti vasvike kune vavanoshanda navo, vashanyi vemuno vekuSychelles, vanosanganisira Mason's Travel, Creole Travel Services, uye nhandare yendege Qatar Airways vakasaina sevaratidziri wechiitiko chaicho chakaitwa kubva na7 kusvika na9 manheru (Seychelles nguva) muna Chikumi 25, pavakabatanidzwa nevane makumi matanhatu nevashanu vekuUS vafambi vekufamba kubva kumaguta akasiyana siyana eUS kwezuva rinobudirira remisangano nekutsinhana.
Kutevera kugamuchirwa kwakanaka kubva ku Tourism Seychelles timu, vatori vechikamu uye varatidziri vakaenderera mberi nekuitisa misangano yeumwe-ne-mumwe mavakachinjana ruzivo nezve mamiriro azvino emusika, zvirevo zvekuchengetedza zviri kuitwa nevanobata munharaunda muSychelles pamwe nezviri kuitika maererano nezvigadzirwa zvitsva mukati mekuenda.
Iyo nzira yekuratidzira yaive ichiitwa kekutanga kubvira 2018 yakati Tourism Seychelles Regional Director we Africa & America, David Germain. "Muna 2019 na2020, hatina kukwanisa kuenderera mberi neratidziro yemumugwagwa, asi sezvo denda richiramba riripo, takafunga kuita chiitiko ichi, nekugutsikana nevatinoshanda navo nevatori vechikamu vakatora chikamu," VaGermain vakadaro.
Kufarira muSychelles kunoramba kuri pamusoro muUnited States kunyangwe hosha iyi, akadaro, kunyanya pakati pevashanyi vanoenda kunzvimbo dziri kure kuenda kuAfrica neMiddle East nyika pazororo, uyezve voenda kuSychelles sekuwedzera kuzororo ravo. 1,934 vashanyi vanobva kuUnited States vakashanyira Seychelles kusvika ikozvino gore rino kusvika 18 Chikunguru.